Hindiya Tirada ugu baneyd oo ka dhimatey"maalin kaliya Coronavirus – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Hindiya Tirada ugu baneyd oo ka dhimatey”maalin kaliya Coronavirus
Hindiya Tirada ugu baneyd oo ka dhimatey”maalin kaliya Coronavirus
Tirada dhimashada coronavirus ee ka soo baxday Hindiya ayaa kor u kacday laba kun oo qof maalin gudaheed, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dhimashada 11,903 ee ka dhacay dalkan weyn ee Koonfurta Aasiya, sida lagu sheegay tirakoobyo rasmi ah oo cusub oo la shaaciyey Arbacadii.
Kordhintan ayaa qayb ahaan sabab u ah dib-u-eegista tirooyinka ku yaal Bombay, oo ah magaalada ugu daran ee uu cudurku faafa, iyada oo 832 dhimasho ah lagu daro tirada maalinlaha ah “kala duwanaanshaha” ee tirakoobka dhibanayaasha.
Dhinaceeda, caasimada, New Delhi, oo ah halka ay xaalada caafimaadku ka sii xumaaneyso, ayaa diiwaangelisay 400 dhimasho ah 24-kii saac ee la soo dhaafay, sida laga soo xigtay “Agence France-Presse”.
Dhimashada rasmiga ah ee Hindiya Talaadadii waxay ahayd 9900, oo tirakoobkani wuu ka yaryahay xaqiiqda, laakiin wali waa mid ka fog tirada dadka ugu badan ee laga diiwaan geliyey Yurub ama Mareykanka.
Markii la wajaho xaalada adag ee dhaqaale, Raiisel wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu go’aansaday inuu kor u qaado horaanta bisha Juun talaabooyinka go’doominta adag ee la soo rogay ilaa dhammaadkii Maarso, laakiin xayiraado ayaa wali jira.
Tallaabooyinka go’doominta ah ayaa kor loo qaaday inta uu cudurku weli ku faafayo waddamada, kuwaas oo duubanaya ilaa 11 kun oo kiisas cusub oo la xaqiijiyey maalin kasta, illaa iyo hadda waxay tirinayaan illaa 354,065 xaaladood.
Iyaga oo wajahaya darnaanta dhibaatada caafimaad, Tamil Nadu, koonfurta dalka iyo mid ka mid ah gobolada ugu dhibka badan ee ay la jiraan New Delhi iyo Maharashtra, ayaa go’aansaday inay xiraan caasimada gobolka, Chennai, qeybtii labaad ee bisha Juun.
Waxaa xusid mudan in khubarada caafimaadku rumeysan yihiin in cudurka faafa uusan wali gaarin heerkiisii ​​ugu hooseeyay ee Hindiya, kaasoo muujinaya suurtagalnimada in kiisas badan la diiwaan geliyo maalmaha soo socda.
Previous articleDawo lagu daweynayo corona virus ee Dexamethasone
Next articleIndia records a “daily high” in Corona deaths
Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday “hab fudud” oo lagu dheereeyo...